किन हुन्छ बालबालिकालाई परीक्षाको डर ? - Naya Patrika
किन हुन्छ बालबालिकालाई परीक्षाको डर ?
नयाँ पत्रिका काठमाडाैँ २ वैशाख | बैशाख ०२, २०७५
बच्चालाई सानै उमेरमा स्कुल पठाउने प्रचलन बढ्दै छ । बोल्न जान्ने हुनेबित्तिकै किताबका कुरा सिकाउनु त्यति राम्रो होइन । यद्यपि, स्कुल गएपछि पनि प्रयोगात्मकभन्दा भाषिक ज्ञान बढी दिइन्छ । बच्चाले खेलेरै पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । सानो उमेरमा स्कुल पठाउँदा बच्चाको सिर्जनशीलतामा कमी आउने समस्या हुन सक्छ ।
मनोविद्, मार्क नेपाल
स्कुलमा जहिले पनि ‘चाइल्ड फ्रेन्ड्ली’ वातावरण हुनुपर्छ । बच्चाको उमेरअनुसार सिट, साइकोलोजी बुझ्ने शिक्षकको पनि आवश्यकता हुन्छ । स्कुलबसमा कोचाकोच गरेर कहिल्यै स्कुल पठाउनु हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरूमा नकारात्मक भावनाको विकास हुन्छ । बच्चालाई सानै उमेरमा परिवारबाट टाढा राख्दा उनीहरू शंकालु, डराउने स्वभावका हुन सक्छन् ।
बालबालिकाले अरूको नक्कल गरेर सिक्ने गर्छन् । यदि शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीसँग असल व्यवहार नगरेमा पछिसम्म पनि बच्चाले नराम्रो व्यवहार देखाउने गर्छन् । शिक्षक जहिले पनि विद्यार्थीको अगाडि नमुना बन्न जरुरी हुन्छ । कहिल्यै पनि एउटा विद्यार्थीलाई अर्कोसँग तुलना गर्नुहुँदैन । स्कुलको शुल्क तिर्न ढिलाइ गरेकै कारण परीक्षाबाट वञ्चित गर्नेजस्ता मानसिक तनाव दिने गर्छन् । जसले विद्यार्थीमा हीनताबोधको भावना जागृत हुन्छ ।
कुन उमेरमा स्कुल ?
आफ्नो सन्तान शारीरिक रूपमा सक्षम भएपछि मात्र स्कुल पठाउनुपर्छ । ४–५ वर्षको उमेरपछि बच्चालाई स्कुल पठाउँदा राम्रो हुन्छ । किनकि, यो उमेरमा बच्चाको दिमाग विकास भएको हुन्छ । सानो उमेरमा स्कुल पठाउँदा बच्चालाई खाना, पोषण, निद्रालगायत नपुग्ने हुन सक्छ र रोग लाग्ने गर्छ । सानै उमेरमा स्कुल पठाउँदा परिवार सम्झेर राम्रोसँग नपढ्ने पनि हुन्छ ।
बालबालिकालाई हौसला र प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्छ । भाषिक आधारमा नम्बर दिने शिक्षा प्रणालीका कारण अरूभन्दा कम नम्बर आएमा बच्चालाई नकारात्मक भावना पैदा हुन पनि सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीलाई अंकसँग तुलना गर्नुहुँदैन । त्यस्तै समस्याका कारण पछिल्लो समय साना उमेरका बच्चाहरू परीक्षा दिनै डराउँछन् । कतिपय स्कुल जान नरुचाउने, रुने, नजाने स्वभावका पनि हुन्छन् । जसलाई एक्जाम फोबिया भनिन्छ । यस्ता बालबालिकालाई किताबीबाहेक अन्य क्रियाकलाप पनि सिकाउन जरुरी हुन्छ ।
राप्तीमा डायलासिस सेवा सुरु
सपनामा डराउनुहुन्छ ? उपचार गर्नुस्
छालाका लागि पानी
आन्द्राको समस्या टाइफाइड
नाभीमा लगाउँदा अनुहारमा चमक !
हाड दुखे के गर्ने ?